ᐈ Ulwakha njani uluhlu lwe-M3U IPTV kwi-【2022】 - KULULA
M3U Spain uluhlu
Uluhlu lweLatin IPTV
Olunye uluhlu lweM3U
Jonga uLuhlu lweM3U kwiVLC
Jonga uluhlu lweM3U kwiRoku
Khuphela GB WhatsApp Delta APK
BlackMart APK inguqulelo yamva nje
Khuphela i-Deezer Premium MOD
Inguqulelo yamva nje yeMX Player Pro
Khuphela iTinder Gold Mod APK
Eyona M3U IPTV Uluhlu luka-2022
I-IPTV yitekhnoloji ethe yaba ne-boom eninzi kule minyaka ilishumi idlulileyo, kwaye ekuhambeni kolu hambo, iye yavela kakhulu. Ngoku phantse naliphi na iqonga lokuzonwabisa lokusasaza lisebenzisa le migaqo ukwenza uluhlu lweM3U.
Ukuba awukayazi malunga ne-IPTV kunye noluhlu lwe-M3U, esi sithuba sesakho. Uya kufumana yonke into malunga nale protocol ukonwabela ukhetho olusinika lona kwezolonwabo kunye nendlela yokwenza uluhlu lwethu lwe-M3U ukuzongeza kwiiseva zethu ze-IPTV.
Uza kufunda ntoni apha?
Yintoni uluhlu lweM3U?
Yeyiphi iteknoloji esetyenziswa nguM3U ukusebenza?
Ngowuphi umxholo onokuyonwatyelwa ngoluhlu lwe-M3U?
Njani kwaye phi ukukhuphela uluhlu M3U?
Luluphi uluhlu lwesitishi se-IPTV?
Umahluko phakathi kwe-IPTV kunye nokuHamba
Ulwakha njani uluhlu lwe-M3U IPTV ngeenkqubo
Ulwenza njani uluhlu lwe-M3U IPTV nge-notepad kunye nokuhlela amajelo
Lubandakanya ntoni uluhlu lwe-IPTV M3U yaseMexico kwi-Intanethi?
Uluhlu lwe-IPTV - M3U Mexico
Uluhlu lwe-M3U lwamajelo aseMexico
Uluhlu lweemovie zeM3U ezivela eMexico
Olona luhlu luhlaziyiweyo nolwasimahla lweM3U
Uluhlu lwe-IPTV-M3U yaseSpain kunye nezemidlalo
Uluhlu lwe-IPTV - isiLatini kunye nehlabathi leM3U
Uluhlu lwe-IPTV-M3U yeemuvi kunye nothotho
Ululayisha njani uluhlu lweM3U kwiQviart Combo V2
Ulufaka njani uluhlu lwe-M3U kwi-SS IPTV
Kutheni uvelisa uluhlu kwi-SS IPTV?
Uluhlu lwe-iptv yesiLatini
Whatsapp Delta inguqulelo yamva nje
Ifomati ye-M3U luhlobo lwefayile yokwandiswa kwefayile, enokuvulwa kwaye ihlelwe kunye naluphi na umhleli wombhalo, umzekelo, i-notepad yeWindows. I-M3U sisishunqulelo se-“MPEG version 3.0 URL”.
Olu hlobo lwefayile lusetyenziselwa ukwenza okanye ukugcina uludwe lokudlalayo lwemidiya okanye uludwe lokudlala.
Ekuqaleni kwayo yayixhaswa kuphela yiWinamp, kodwa namhlanje inokuxhaswa ngenani elikhulu labadlalis, eyenze umgangatho xa isiza ekudaleni uluhlu lokudlala.
Yintoni eyenziwa luluhlu lwe-M3U luchaza indawo yazo zonke iifayile zemultimedia esifuna ukuzidlala. Kule nto, kukho uhlobo oluthile lokubhala ekufuneka silusebenzise xa sifuna ukwenza uluhlu lwethu. Siza kufunda oku ngezantsi.
Uluhlu lwe-M3U lwenziwe ngoluhlu lweedilesi zewebhu eziye zayindawo ekude yomxholo onokuyonwabela, Ungabandakanya iinkqubo zeprimiyamu okanye amajelo apheleleyo naphi na emhlabeni, kungakhathaliseki ukuba zezasekhaya, zelizwe okanye zamazwe ngamazwe.
Ukuze uluhlu lwe-M3U lusebenze, kufuneka longezwe kumdlali wemidiya oxhasa olu hlobo lwefayile.. Okwangoku, phantse nasiphi na isicelo okanye inkqubo eyenzelwe ukudlala umxholo wemultimedia iyakwazi ukudlala le fomati yefayile ngaphandle kobunzima.
Ezi ntlobo zoluhlu zinenzuzo yokuba zihlaziywa rhoqo zikude.Ngale ndlela, asiyi kuba nexhala malunga nokuphelelwa kwexesha le-URLs apho idatha yemixholo yemultimedia esiyithanda kakhulu ibanjwa.
Uluhlu lweM3U olugqwesileyo lwe-IPTV eSpain ngo-2022
Izintlu eziPhezulu ze-3 M2022U Latino
Ulwelwa njani uludwe lweM3U lwe-Kodi
Ulujonga njani uluhlu lweM3U kwiRoku
Ulongeza njani uluhlu lweM3U kwiPlex
Ulongeza njani uluhlu lwe-M3U kwi-OTTPlayer
Ulujonga njani uluhlu lweM3U kwiVLC
Uluhlu lwe-M3U lunokuqulatha naluphi na uhlobo lomxholo onokucinga ngawo. Ukwazi ukufumana uluhlu olukhethekileyo lwamajelo ahlukeneyo okanye amajelo athile ommandla okanye ilizwe.
Ngokufanayo, ungafumana okanye ugcine iimuvi, uthotho kunye namaxwebhu ngolwimi lwakho lwenkobe okanye ngezinye iilwimiNkqu nemibhalo engezantsi ingagcinwa kwisiqulatho ngasinye.
Iifayile zasekhaya zinokugcinwa ngoluhlu lokudlala lwe-M3U, ukuze ukwazi ukucwangcisa iodolo yokudlala, kwaye wonwabele uluhlu lwakho kuso nasiphi na isixhobo okanye isidlali semidiya.
Ngoluhlu lwe-M3U singonwabela ukonwatyiswa okubanzi kokusasaza kuso nasiphi na isixhobo okanye ngabadlali bomxholo wemultimedia. Okulandelayo siza kuchaza ukuba ungakhuphela phi kwaye njani uluhlu lweM3U.
IPTV idwelisa iSpain
Ukukhuphela uluhlu lwe-M3U kufuneka uqale uye kulo esi sixhobo, kwaye ke ungenisa ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Ukuba awunayo, ungayenza ngokulula ngokulandela iqhosha "Culela phezulu" Okanye ungasebenzisa amaqonga kaGoogle, Facebook kunye neTwitter ukwenza oko ngokukhawuleza.
Sakuba silifakile iphepha, siya kwindawo yokukhangela kwaye sibhale igama loluhlu esifuna ukulukhangela. Kubaluleke kakhulu ukuba uhlale ubeka isimaphambili "IPTV" o "M3U" ukuze i-injini yokukhangela isithathe ngokuthe ngqo kwezi ntlobo zoluhlu.
Ukufumana uluhlu oluhlaziyiweyo yiya kwibhokisi ethi "Ukufaneleka" kwaye ukhethe ukhetho "Umhla" kwaye ke zonke izintlu zamva nje ziyakuvela, kwaye ziyasebenza xa zizonke.
Ekugqibeleni ukhetha ngokunqakraza kuluhlu olukhethayo, kwaye uqhubeke nokukopa idilesi evela kwibha yedilesi. Le yi-URL oza kuyikhuphela kwisicelo sakho se-IPTV okanye kwisidlali somxholo wemultimedia osisebenzisayo.
Ukuba ufuna ukwazi ngezona nkqubo zibalaseleyo kunye nabadlali be-IPTV okanye uluhlu lweM3U onokuthi ulufake, jonga amanye amangeno ethu ukuze ukhethe eyona ifanele iimfuno zakho.
Ngoku, isifundo esisandula ukusichaza sisebenzela elinye lawona maphepha adumileyo ukufumana uluhlu lwe-M3U, kodwa le ayisiyiyo yodwa iwebhusayithi ekudidi lwayo. Olu luhlu lulandelayo luchaza amanye amaphepha ewebhu ukuze ufumane uluhlu lwakho lweM3U.
IStratustv: Ikubonisa uluhlu loluhlu kwifomathi ye-M3U onokuyongeza ngokulula kwaye uyidlale. Ezi zintlu zicwangciswa ngokwelizwe nangeelwimi ezahlukahlukeneyo. Uluhlu ngalunye luneetshaneli zomxholo ezahlukeneyo kakhulu kuyo yonke incasa kunye nayo nayiphi na iminyaka.
IPTVSRC: Kweli phepha unokufumana uluhlu oluhlaziywa yimini. Ibonelela ngoluhlu kwi-M3U eneentlobo ezahlukeneyo zesiqulatho kwiitshaneli, uthotho kunye neemuvi, ukongeza kwiilwimi ezininzi nakuyo nayiphi na iminyaka. Kwakhona njengexabiso elongezelelweyo kuluhlu ngalunye unokufumana amajelo kwi-HD.
Ikufanele: Ngokwenene yibhlog ejongana nezihloko ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, kule ilandelayo unxibelelwano Ungaya ngqo kwingeniso ekubonisa uluhlu loluhlu lwe-M3U oluhlaziyiweyo kwaye unokufumana ukuba luhlobo luni lomxholo, kuba ziyalelwe.
Yonke i-APK: Le bhlog inongeniso kunye noluhlu oluhlaziyiweyo kunye noluhlu olukhululekile ngokupheleleyo. Ukuzifumana cofa apha.
Fluxus.TV: Kule webhusayithi unokufumana izintlu ezingenasiphelo kwifomathi ye-M3U elungele ukuveliswa ngaphandle kweempazamo kuba zihlala zihlaziywa. Umxholo wahluke kakhulu kwaye unokufumana uthotho, iimuvi kunye namajelo ayo nayiphi na iminyaka nangeelwimi ezahlukeneyo.
IPTV imele iProtokholi ye-Intanethi yeTV, ethi Bubuchwephesha obusebenzisa iprotocol ye-IP kunye ne-intanethi ukuhambisa umxholo we-multimedia ngokusasaza. Ngokuqhelekileyo isetyenziselwa ukuhambisa amajelo, uthotho kunye neemuvi kwinethiwekhi yebroadband.
Ukusetyenziswa kwenethiwekhi ye-broadband kuphelisa ukusetyenziswa kweentambo ezicasulayo kunye ne-antenna. IPTV luludwe lwamajelo asasazwa kwi-intanethi kwaye esinokufikelela kuso nasiphi na isixhobo, kuba olu luhlu sinokululayisha kulo naluphi na usetyenziso lokuveliswa komxholo wemultimedia.
Kukho uhlobo loluhlu olusetyenziswa kakhulu kwiiplatifti ze-IPTV, zezo zidalwe kunye nezandiso ze-M3U. Makhe sibone ukuba bamalunga nantoni kwaye singenza njani uluhlu lwethu nge-IPTV.
I-IPTV ithandwa kakhulu ngenxa yokuba awufuni kuqesha umsebenzisi ukuba ukonwabele umxholo wokusasaza, oku kukukhulula kwiindleko ezongezelelweyo eziluncedo kakhulu kugcino lwezoqoqosho. Ukungaphumeleli oko, ungonwabela i-IPTV ngoluhlu lwe-IPTV okanye lweM3U.
Uluhlu lwe-IPTV lusetyenziselwa ukugcina iidilesi okanye ii-URL apho amajelo ahlukeneyo asebenza kwi-IPTV afumaneka kwiwebhu. usebenzisa iidilesi ze-IP ezikude.
Uluhlu lwe-IPTV esihlala silufumana kwi-intanethi luza ngefomathi ye-M3U, okuyifomathi yendalo yonke ngokufanelekileyo, kwaye ehambelana nabadlali abaninzi be-multimedia, nangona kunjalo, unokufumana uluhlu lwe-IPTV kwi-M3U8 okanye i-W3U ifomathi.
Zombini inkonzo kunye ne-IPTV kunye nokusasaza kuninzi ukufana ngokubhekiselele kwezinye iimpawu, nangona kunjalo, kukho ukungafani okubonelela ngexabiso elikhethekileyo kwenye nganye yezi nkonzo zokuzonwabisa.
Owona mahluko ufanelekileyo kukuba uluhlu lwe-IPTV lusebenzisa inethwekhi yabucala, ethanda ukujikeleziswa kwedatha ngokukhawuleza nangendlela ezinzileyo.. Okwangoku, iinkonzo zokusasaza zifikelela kwinethiwekhi efanayo evulekileyo, engalawulwayo njenge-imeyile kunye nokukhangela kwiwebhu, oko kukuthi, inethiwekhi enganikezelwanga.
Ngamafutshane, inkonzo kamabonakude yosasazo ifuna iimfuno zoqhagamshelo eziphezulu, ngelixa uluhlu lwe-IPTV alufuni iimfuno ezininzi, ngoko umxholo unokonwatyiswa ngesantya esingekho phezulu kakhulu se-intanethi.
Ukuba ufuna ukwenza uluhlu lwe-M3U, kufuneka uqale wazi ukuba kukho ulwakhiwo lomyalelo olulodwa omele ulukhumbule ukwenza uluhlu olusebenza ngokufanelekileyo lweM3U IPTV.
Olu lwakhiwo lulandelayo:
#EXTINF: (ubude), (iimpawu), (isihloko setshaneli)
Siza kunika iinkcukacha ukuba iprotocol nganye ithetha ntoni:
# EXTM3U: Kunyanzelekile ukuyibeka kuphela ekuqaleni kwesicatshulwa. Lo myalelo uxelela umdlali ukuba uluhlu lukwifomati eyandisiweyo ye-M3U kwaye oku kungenxa yokuba ineempawu ezongezelelweyo ezithile ezingafezekiswanga kuluhlu olusisiseko lwe-M3U.
#EXTINF: Ngumyalelo obonisa apho i-metadata eyongezelelweyo iqala khona ukusasaza ngalunye kuluhlu. Lo myalelo mawusetyenziswe ngalo lonke ixesha sifuna ukongeza itshaneli, oko kukuthi, ukuba sidwelisa amajelo alishumi, umyalelo mawuvele izihlandlo ezilishumi kwisitishi ngasinye.
Ikwakhatshwa ziimpawu ezithile zemultimedia esiza kuyivelisa kwakhona. Ibandakanya: ubude bexesha, iimpawu kunye nesihloko setshaneli.
Ngamnye kubo kufuneka ahlulwe ngesithuba esingenanto. Makhe sibone ukuba uphawu ngalunye lusetyenziselwa ntoni.
Ubude bexesha: ihambelana nexesha elilinganisiweyo ngemizuzwana yefayile yemultimedia ekuthethwa ngayo. PKuluhlu lwe-IPTV kuphela iiparamitha ezimbini ezaziwayo, ixabiso elinguziro (0) kunye nexabiso thabatha enye (-1).
Ngokubanzi kufuneka sisebenzise ixabiso -1 ukubonisa kumdlali ukuba ixesha lokusasaza alilungiswanga okanye alinakumiselwa.
Iimpawu: Lulwazi olongezelelweyo esifuna ukulubonisa ngaphakathi komdlali. Ezi datha zinokuba sisikhokelo senkqubo, useto, uphawu lwetshaneli, iilwimi kunye nezinye iimpawu.nangona kunjalo oku kukhetho.
Umgca wesihloko setshaneli: ibonisa igama eliza kuvela kumdlali. Kufuneka yandulelwe sisiphumlisi (,) kwaye kungabikho sithuba emva kwesiphumlisi.
URL: Apha siza kubonisa i-URL okanye idilesi yewebhu apho itshaneli, uthotho okanye imuvi esifuna ukuyongeza kuluhlu ibanjwe.
Ngokunjalo, idilesi okanye indlela apho ifayile yemultimedia yasekhaya ibanjwe ibhalwe apha, oko kukuthi, leyo igcinwe kwikhompyuter yethu.
Ngoku uyazi oku, singaqala ukwenza uluhlu lwethu lokudlala kwifomathi ye-.m3u, kwaye into yokuqala esiza kuyenza kukuvula umhleli wokubhaliweyo ngokwenkqubo yethu yokusebenza.
Into elandelayo iya kuba kukuqala ukongeza ulwazi lwamakhonkco esifuna ukuvelisa kwakhona ngokulandela umthetho olandelwayo esele siwubonisile ngaphambili. Ukuze ubakhumbule:
Khumbulani ukuba nowokuqala umthetho; koko kukuthi; # EXTM3U kufuneka yongezwe kube kanye kuphela kumgca wokuqala, akufuneki iphindwe ukusuka apha ukuya phambili. Makhe sijonge eminye imizekelo yale miyalelo:
#EXTINF:-1, Umzekelo bhanyabhanya (2017)
#EXTINF:-1, Star Wars Isiqendu I
H: \_ PELICULAS \_ STAR WARS \_ Star Wars Isiqendu I The Phantom Menace (1999) .mkv
Okokugqibela, xa sele songeze iidilesi zazo zonke iitshaneli, uthotho kunye neemuvi esifuna ukuzibona, kufuneka siqhubeke nokuzigcina.
Kwifayile yefayile, kufuneka uye kukhetho "Gcina njenge". Xa le festile ilandelayo ibonisiwe, kufuneka ufumane indawo apho uzakugcina khona ifayile kwaye kwicandelo legama kufuneka ubeke igama oza kulinika ifayile. kwaye ngokuyimfuneko yongeza ulwandiso lwe-.m3u ekupheleni kwegama.
Ukuba awongezi olu lwazi, ngoko ke uluhlu alunakuphinda luveliswe zizicelo okanye iinkqubo apho ufuna ukuvelisa kwakhona olu luhlu.
Ngoku ukuba uludwe lwakho lwabucala lwenziwe, kuya kufuneka uye kulubeka kwisicelo sakho okanye inkqubo oyithandayo kwaye uyonwabele.
Ukuba awukayazi indlela yokongeza olu luhlu kwezi nkqubo zokudlalwa, ungandwendwela izifundo zethu apho siya kuchaza inyathelo ngenyathelo indlela yokulayisha uluhlu lweM3U.
Sele sisazi ukuba uluhlu lwe-M3U luqulethe izinto ezahlukeneyo kakhulu. Kwimeko yoluhlu lwe-IPTV yaseMexico, unokufumana yonke imidlalo yasekhaya neyamazwe ngamazwe, iindaba, ifilimu kunye namajelo abhaliweyo..
Amanye amajelo anokuba:
Umjelo we-10 Chetumal.
ICableOnda Sports FC.
Kuluhlu lwe-IPTV okanye lweM3U ufumana iziteshi ezivela kumazwe ahlukeneyo kunye neelwimi ezahlukeneyo kwaye isenokungabi yile nto uyifunayo.
Ke, ukuba useMexico kwaye ufuna ukufumana uluhlu lweetshaneli zaseMexico kunye neemuvi, sikushiyela uluhlu oluhle oluya kukunceda ufumane olona lonwabo lubalaseleyo:
Ngoku ukuba sifake inkqubo exhasa iifayile ze-M3U, sinokugxila kuphela ekufumaneni uluhlu lwe-M3U olubalaseleyo oluhlaziyiweyo kunye ne-100% yasimahla.
Nangona ngamanye amaxesha akulula kangako ukufumana ezi zintlu, thina Sikwenzele ukukhangela emva koko sikushiyela ezona zintlu zibalaseleyo zeM3U ezihlaziywa ukude kwaye ukufikelela kwazo simahla ngokupheleleyo..
I-Qviart Combo V2 yisathelayithi yedijithali kunye ne-TDTHD decoder okanye i-receiver, eyongezelelweyo inenkxaso eqhelekileyo ye-DVB-T2 kunye ne-DVB-S2. Isasazwa ngokuzinzileyo kwaye iququzelela ukurekhoda nangaliphi na izibuko zayo ezimbini ze-USB, ikwanayo noMdlali weMedia onomgangatho womfanekiso ongaqhelekanga ngenxa yenkcazo yayo ye-1080p FullHD.
Ukonwabela ukonwabisa, kuya kufuneka ufakele amajelo akho owathandayo kwaye nazi iinketho ezimbini, ngoluhlu kunye nejelo ngetshaneli:
Okokuqala lungiselela uluhlu olugciniweyo lwetshaneli, emva koko:
Faka i-pendrive yakho kunye namajelo kwaye ukhethe ukhetho lwe-USB.
Khetha iqhosha elityheli elithi “Layisha idatha".
Isixhobo siya kukucela ulungelelwaniso ngendlela yombuzo othi “¿Phakama?”, ophendula kuyo lo nto“SI".
Ixesha lokuba "Khuphela uluhlu", ivula ifayile.
Xa ufaka i-pendrive kwidikhowuda, usuka kwitshaneli 1 ukuya Imenyu> Ukwandiswa> Imenyu ye-USB.
Izakucela ukuba uqinisekise"Ukuhlaziya?"
Emva kwemizuzwana embalwa uya kukwazi ukuphuma kwimenyu, kwaye ucime isixhobo kwi-remote control kwaye emva koko ngokwasemzimbeni kwiqhosha layo lokucima.
Xa uyiqala kwakhona emva komzuzu, uluhlu lwe-M3U kufuneka sele lulayishiwe kwi-Qviart Combo V2 yakho.
Qaphela: Ukuba ayihlaziywanga, kufuneka ujonge ubumbeko lwenethiwekhi. Kwaye ukuba unejelo elishiywe ngasemva, unokulandela la manyathelo alandelayo.
Inyathelo lokuqala kukungenisa IPTV ukhetho.
Emva koko uya kubona isikrini esilandelayo:
Emva koko khetha ukhetho olubomvu oluthi "Yongeza”Ukongeza isitishi esitsha.
Igama eliyimfihlo elimiselweyo liya kuba ngu-0000, ngenisa kwaye uqhubeke:
Ungangenisa isitishi ngeendlela ezininzi:
I-URL yomfanekiso: Ngokukhetha utolo olusekunene lomyalelo, ungangenisa i-URL ngomfanekiso oya kuba ngumfanekiso wesitishi.
I-URL yevidiyo: Enye inketho oya kuyibona xa ucofa utolo olusekunene kukungenisa i-URL yesitishi esikhethiweyo kwi-IPTV.
Iflegi yabantu abadala: kumajelo abantu abadala.
Emva kokufaka i-URL yesitishi kwaye ukhethe u-Kulungile, qalisa ukulayisha itshaneli.
Ijelo ngalinye lilayisha malunga nemizuzwana engama-45.
Ekupheleni kongeniso ngalunye, iphepha lokuqala liza kubonisa ithayile. Kulapho ubona khona umphumo obangelwa yigalelo lemifanekiso evela kumajelo. Ukuba asiyongezanga ngemifanekiso iya kujongeka ngolu hlobo:
6.Ukongeza imifanekiso, khetha nje iqhosha elibhlowu elithi “Hlela".
Ngala manyathelo alula unokongeza itshaneli ozikhethayo kwiQviart Combo V2 yakho.
Sincoma ukuba ulandele inyathelo ngenyathelo ukufaka i Uluhlu lwe-M3U kwi-SS IPTV:
Yiya kwisicelo I-SSIPTV kwi-Smart TV yakho.
Le bhokisi yencoko yababini ilandelayo iya kuvula:
3.Khetha i Useto, njengoko utolo lubonisa:
Isikrini esilandelayo siya kuvela:
Okulandelayo kufuneka uvelise ikhowudi yoqhagamshelwano. Khetha ukhetho Fumana ikhowudi (Utolo loku-1), kunye nekhowudi yealphanumeric iyakwenziwa ekufuneka uyikhuphele (Utolo 2).
Ngoku yiya kwiphepha elisemthethweni le I-SSIPTV kwibrawuza yakho ngokucofa apha
Uya kubona isikrini esilandelayo
Beka ikhowudi apho ithi Faka iKhowudi yoQhagamshelwano (Utolo loku-1 kumfanekiso olandelayo).
Khetha Yongeza isixhobo (Utolo 2).
Eli phepha liza kuvula apho kufuneka ubeke apho litsho khona Uluhlu lokudlala lwangaphandle kwaye ukhethe ngaphakathi YONGEZA INTO.
Ifestile ezivelelayo ziya kuvula
Kule kufuneka ufake le datha ilandelayo:
Igama Elibonisiweyo: Dwelisa igama. Umzekelo: Uluhlu lwam lweM3U
umthombo: I-URL yoluhlu lwe-M3U ofuna ukuyilayisha.
Ifestile ye-pop-up iya kuvala kwaye isikrini siya kuhlala apho kufuneka ugcine idatha engenisiweyo, ukhetha ukhetho
Sele ukwisicelo seSmartTV yakho kufuneka uhlaziye ulwazi, ukhethe i icon ye layisha kwakhona phezulu ekunene kwimenyu:
Ukusukela ngoku ukuya phambili ungajonga zonke iitshaneli kwikhonkco lakho.
Kwenziwe ihlohlwe ngempumelelo uluhlu lwakho lwe-M3U kwi-SS IPTV.
Ukukwazi ukuseka iodolo yomntu ngamnye yokuveliswa kwakhona, kunye nokuphelisa iifayile ezingeyomfuneko, okanye ukongeza ezintsha. Ngaloo ndlela uzigcinele ingxaki yokuzongeza ngabanye.
Uluhlu ngalunye kufuneka lukhutshelwe kwisixhobo okanye ubuncinane lugcinwe kwi "akhawunti yam", kwimeko yokusebenzisa i-ForkPlayer kwi-Smart-TV.
Njengenqaku elibalulekileyo ekufuneka liqwalaselwe, ukuba ufuna ukumamela umculo, kwaye unonxibelelwano oluhle lwe-intanethi, awudingi ukugcina uluhlu lokudlala. Kuya kwanela kuphela ukuyilayisha kumdlali, isixhobo esiphathwayo okanye kwiPC.
Khuphela inguqulelo yamva nje ye-WhatsApp Plus (AntiBan) APK
Khuphela iVideoder Premium Apk ka-2022
Khuphela inguqulelo yamva nje yeYouTube Music Premium APK
Uluhlu lwasimahla lwe-IPTV lwabantu abadala (luhlaziywe ngo-2022)
Uluhlu lwabadlali abaTicky
Ulujonga njani uluhlu lwe-IPTV kwi-Kodi?
© 2022 MtresU • Yenziwe nge GeneratePress